Cryptocurrency Jobs Chinyorwa cheBlockChain Kuitisisa mikana
Dubai mabasa ne visa - Tsvaga Hiring Makambani
Yakabudiswa na Dubai City Company at March 10, 2018
Tsvaka Cryptocurrency Jobs
Cryptocurrency jobs market is growing super fast all over the globe. Dubai City becomes the world’s first blockchain-powered Government. Does our city aspire to be the first blockchain-powered government before the expo 2020?. Cryptocurrency jobs vacancies are growing up like crazy. There are so many new employment opportunities even for the non-IT workers. People searching for startups companies like Bitcoin or Ethereum or Ripple payment system. For example, the Bitcoin.com website was built on the back of its new bhizimisi pasi rose.
When you think of all crypto basa rekuita-related employment opportunities. You should definitely think Bitcoin.com career website. They are the biggest company in the crypto financial market. As a matter of fact, the market is growing fast. So, you can get cryptocurrency jobs remote zvakakurumidza zvikuru mugore rinotevera. Cryptocurrency nhau yemakambani inonyatsobudisa zvese zvenyika. Kunyanya pakutambisa kupfurikidza kune dzimwe nzira dzakawanda. Kana uri kutsvaga basa mumichina ye cryptocurrency. Iye zvino zvinoshamisa nguva yekuva mubudiro wemabasa anobudirira.
On the other hand, the cryptocurrency companies are growing much faster than we even suspected. New companies generate unparalleled inivhesitimendi and growth in recent months in cryptocurrency career market. And while many new technologies still growing. The cryptocurrency market remains one of the largest and fastest growing. Cryptocurrency employment is growing among non-corporate startup opportunities. Angel.co has managed an amazing ripoti pamusoro pemakethe e cryptocurrency.
Kwete chete mamwe mabasa aripo, asi nzvimbo dzinoshanda ne blockchain dzinobhadhara zviri nani. Paavhareji vashandi vari kupiwa mibairo ye10-20 peresiti yakakwirira kudarika isina-crypto mabasa.
The Cryptocurrency iri kukura
Mari iri kuputira mumakambani e cryptocurrency uye matsva ekutanga. Kubva kuAdelList data data, kambani yakatarisa muhafu yekutanga ye2018. Uye uone kuti kushandiswa kwekutsvaga mubazi re cryptocurrency ichikura zvakanyanya kukurumidza kupfuura mamwe misika. Uyezve, pane mari yakawanda inotengeswa mumakambani e cryptocurrency mu2019 kupfuura mune yose ye2010 uye 2016 yakabatana.
Dubai City also has its own cryptocurrency jobs board discussion. Generally speaking about the future of the financial crypto world in Dubai. Kunyangwe izvi zvingava zvechokwadi Icho chiitiko chaNewnote uye chitsva chaiye. Yakaiswa chete mukurumbira, kunakidzwa ku Dubai, uye bhizinesi rakatarisa pa Jumeirah Mina ASalam.
Panguva imwecheteyo, makambani e cryptocurrency ari kukura asi kwete mu Dubai chete. Makambani matsva ari kukwidza mari yakawanda yemari mukati Europe uye United States pamatunhu akakwirira zvikuru. Saka, pasi pemamiriro ezvinhu aya, itsva makambani ane kubhadhara mari yavo yekuwana tarenda yepamusoro.
Nhamba yose yezvinyorwa basa iri kukura zuva rega rega panzvimbo dzevanhu. I cryptocurrency inobhadhara makambani inenge inopetwa kaviri nhamba yezvigaro mumwedzi mitanhatu yekupedzisira. Cryptocurrency Mabasa ari kukura sekupenga muUAE.
Nzira yekuwana basa sei mu cryptocurrency?
Vanotsvaka basa vanongonakidzwa nemakemikari e cryptocurrency nekuda kwekukura kwayo zvakanyanya. The cryptocurrency iri kukura nokukurumidza uye inoita kuti kuve nekushandura kwevashandi vayo.
Kune rumwe rutivi, zvitsva zvitsva zvinofanira kutora mazita kuti makambani e blockchain achakura nokukurumidza munguva yemberi. Semuenzaniso, cryptocurrency jobs NYC startups ndeye 25% yakawanda yekupa zvipo zvisiri kure kune vashandi vayo. Saka kana uri kutsvaga basa uye iwe unyanzvi mu blockchain. Iwe unogonawo kuisa chinangwa chekuita mabasa asiri emhizha mune iyi indasitiri. Somuenzaniso, unogona kushanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakadai sekutengesa uye kushanda.
Dzidzo yepamusoro yepamusoro haisi iyo inotanga kutanga basa ne Bitcoin. Iyi mitsva mitsva inobva mumusika wemari inoratidza kuti vashandi vanogona. Vashandi vatsva vanofanira kungonzwisisa zvinyorwa uye crypto mumakambani emashoko ekutaura. Imwe yenzira yakanakisisa yekuwana basa mumusika we cryptocurrency. Kazhinji kutaura ndeyekushandira mari yemakambani ekuchinjana.
Vaya vanotsvaga avo vasingatsvaki kuita basa mune cryptocurrency. Unogona kugara uchitsvaka mabasa mumusika weCryptoCurrency. Pane nguva dzose nzira yekubuda kune vashandi vekushandira mabasa ekusarudza. For example, if you’re looking for an employment change from your current industry. You should consider working in as a blockchain developer or marketing meneja before applying to a coal mine Bitcoin Industry. There’s always a future in cryptocurrency technology.
Kuwedzera mabasa muBlock Chain mu Dubai?
The Brazil trying to become a fully operational blockchain-powered government. That means all its services will definitely change, including application visa, kuchinjisa mari, kuchinjana mari uye kunyange kubhadharisa nemabhadhariro emunharaunda uye rezinesi revwals
The United Arab Emirate inotarisira kuzadzisa yakakwana kushanda sisitimu ne2020 nepo tekinoroji nyowani yakaenzana kuwedzera pamusoro peiyo 50% kuburitswa muhurumende uye zvikamu zvehurumende. Izvo zvinofanirwa kubatsira nenguva shoma inoshandiswa pane basa rekutanga, uye shoma mari inoshandiswa mubhajeti reUAE.
The new technology will start taking nzvimbo not only in Dubai but also in Abu Dhabi and will be moved towards the whole country. In following years blockchain business will outline so many old systems. One thing we know for sure it will shandura maindasitiri kwese kuMiddle East and in the few countries such as Saudhi Arabhiya and Qatar. The Emirates always modernizing their old systems. And for sure few of the major areas the UAE is looking to transform in the following years will be real estate, money transfers and payment systems.
Bhizimisi vanhu vari kuisa blockchain teknolojia muzvigadzirwa zvemabhizimisi chaiwo muUAE uye Saudi Arabia. Semuenzaniso, kuchengetedza kubhadhara nzira ichaenda nenzira yakareba mukubatsira kunzwisisa kuchengeteka nekusimudzirwa kwevatengi kuvimba kwekombiyuta.
Emirates vabati vehurumende vakaita mitemo yakasimba mumhizha re blockchain. Vanogara vaine chokwadi chekuti kutengeserana kwose kunoponeswa uye kwakachengeteka uye zvekuti zvakakwana zvinoshandiswa.
Kune rumwe rutivi, kune zvimwe zvishoma zvinhu zvakanaka zvaungaita ne cryptocurrency. Unogona kutenga uye kutengesa dzimba dzeBitcoin kana kunyange kutenga mitambo yemoto ye bitcoin. Pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kuva nazvo chero bedzi iwe uri wega cryptocurrency.
Real Estate ne Bitcoin!
IUAE yakagadzirira blockchain here?
Iwo makambani eAU atotanga kutora akawanda mapurojekiti, matsva matsva kushandisa yayo blockchain tekinoroji bhizinesi. Mashoma makambani makuru e tech anotanga kuburitsa mari yedhijitari. Semuyenzaniso, Mercedes kubhadhara kugamuchirwa mumiganhu yekutengesa pakati pevatengi nevatengi vekutengesa. Kune rumwe rutivi, hurumende yeDhailand, kutanga-ups uye global tech giants kutarisira mukana mutsva pane yakakwirira kwazvo. Nemhaka yekuti ambitious blockchain zvirongwa zveA Dubai zvinotangira nguva itsva mukuvandudza.
Izvo chete zvisiri izvo mu cryptocurrency uye blockchain ndezvikamu zvekutanga zvekugamuchirwa. Uyewo, mashomanana makambani ayo anoedza kutyisa vatengi. Asi izvozvo zvichange zvanyangarika nokukurumidza pane zvakatarisirwa.
Top Websites kuAshanda Mabasa mu Cryptocurrency Market - Shandisa Nhasi!
Basa raKe inonzi Cryptocurrency
Shandisa Apa: https://coinmarketcap.com/careers/
Iyo CoinMarketCap ndeye No.1 portal uko vanhu vanogona kutarisa mitengo ye cryptocurrency. Uye iyo inonyanya kuvimbwa uye yakasarudzika sosi yedhata ye crypto vatengesi. Kune mashoma mabasa anopa iwe aungave nawo Semuyenzaniso:
Data Science Engine Engineer
SEO uye Marketing marketing
Uye mazhinji akawanda.
Iyi kambani ine mamiriyoni evanhu zuva rega rega pachikuva.
Vanhu vanotsvaga mapato matsva emari yepasi rose, uye yakanaka yekutsinhana mapuratifomu. Iyo CoinMarketCap zvirokwazvo ichaita kukudziridza mamwe mabasa akawanda anopa kwete chete muUS Kambani ino ichaunza zvakanyanya kumusoro-kusvika-ikozvino mitengo yemusika uye ruzivo rutsva ne capitalizations, mitengo, uye ruzivo rwe cryptocurrency kumakambani epasi rese.
Shandisa Apa: https://jobs.bitcoin.com/
Bitcoin Company ibhizimusi rese cryptocurrency ine mahofisi muTokyo, St. Kitts. Kune rumwe rutivi, kambani inokura zvakakurumidza zvokuti iri kuva nehofisi itsva kuSweden uye Budapest uye Mumbai. Bitcoin kuzvipira ndekuparadzira mashoko ekubhadhara kweBitcoin kuburikidza nekuvapo kwepasi rose. Nezvo izvi mupfungwa, vakagadzira chiitiko chisina kufanirwa kune vashandi vatsva uye vanhu veramangwana mukati mebhizimisi.
Bitcoins nguva dzose kutumira vashandi vavo munyika yose. Somuenzaniso mu Dubai neNew York City kuti uwane nzvimbo itsva. Regai vasangane vatengesi vezvemari, uye kubatsira vashandi vatsva kuenda kumisangano. Bitcoin vatariri vanoteerera vashandi vatsva uye vachitarisira kukurukura nevamwe. Iyo kambani inobatsira kunyange zviitiko zvekugamuchira munyika yose. Nguva kushanda Bitcoin.com, unogona kuva nechokwadi kuti unogamuchira dzimwe nyika itsva. Uyezve, iwe uchava nekutarisa kutsva papasipoti yako.
Pakaipa, kamwechete pagore mushandi anofambisa kambani yedu yose kuSt. Kitts. Ikoko vari kushanda pamwe chete, vasangane mumwe nomumwe zvakare vatariri vanobva kuUAE. Vatongi mukati mebhizimisi uye vanoda kutaura pamusoro pezvinhu zvitsva zvavari chirongwa chekutanga. Cryptocurrency Jobs inonyanya kuzivikanwa inopa bitcoin inoshanda nhasi.
Shandisa Apa: https://consensys.net/careers/
Ethereum ndiyo yechipiri inonyanya kuzivikanwa nekriptocurrency. Ithimba reEtherum rinoita shanduro iyi yekuvandudza iyo yakaunza pfungwa ye "mikonti yakanaka" kune blockchain. Asi mumakore mashomanana anotevera, vari kutsvaga kufamba kune chimwe chinhu chisina simba chinotora. Iyi cryptocurrency inotanga kushanda muna July 2015. Uye mudiki wechirongwa ane 21 ane makore anonzi Vitalik Buterin akasika iyi blockchain system.
Isu tese takapupurira kuti Ethereum cryptocurrency yakakurumidza kusimuka kubva pakuvanzika kuenda kune cryptocurrency mukurumbira mamiriro. Pazasi pane webhusaiti iwe yaunogona kukumbira webasa muEtherum Cryptocurrency.
Shandisa Apa: https://ripple.com/company/careers/
Iyi kambani zvirokwazvo ine iyo 3rd nzvimbo pane yedu chinyorwa. Vanotsvaga vebasa kubva kumativi ese enyika vanogona kunyorera nzvimbo dzinoverengeka kumusoro uko. Iyi kambani iri kutoshanda pamwe nemhando hombe dzakadai seSantander neMari gramu, tarisa pazasi. Iyi firm ndiyo yakanyanya kunaka mukirasi yedhijitari
Shandisa Apa: https://careers.dubaifuture.gov.ae/
Chirongwa chehurumende chakakonzerwa ne cryptocurrency uye blockchain teknolojia. Iyo inozivikanwa zvakanaka Dubai Future Foundation yakaiswa nechinangwa chakasimba chekuumba remangwana rebhizimusi idzva remuchina. Sangano rese kushanda nemapoka ezano muUnited Arab Emirates. Uye nekushandira pamwe kwechokwadi uye kushanda nesimba pamwe nehurumende uye akazvimirira zvikamu. Kuda batsira iwe kuti uwedzere kukwirira mune yako basa uye kubudirira kwebasa.
Shandisa Apa: https://www.blockgemini.com/careers.html
Imwe kambani yeArab yekushandira, ivo vari kutsvaga kuroja mabhizinesi ekuvandudza mabhizinesi pamwe nemakomisheni e cybersecurity. Kambani ine 2 mahofisi muDubai uye imwe hofisi kuIndia. Yakakodzera kunyorera kuDubai chokwadi, zvisinei muIndia inogona kunge yakawanda muripo.
Shandisa Apa: www.adabsolutions.com
Adab solution kambani inoitwa seyokutanga Islamic Crypto Exchange (FICE). Iyo kambani haisi iyo yekutanga yenyika Shariah-compliant crypto exchange. Ivo vanonyatsoshanda pamwe nemabhangi eSharjah.
Zvakare, kambani inoenderana zvizere nemutemo wechiIslam. Uye chokwadi kana iwe uri munhu wechiMuslim, unofanirwa nyorera iyo Dubai-based kambani s sarudzo yekutanga mune yako basa. Iyo kambani ine hurongwa hukuru, semuenzaniso kutarisa kutanga kupa Adab tokens. Saka, kwete chete yakanaka kambani asi iine hukuru hunogona.
Iyo kambani inokurudzirwa zvikuru kuti kuwedzera saizi yavo kuti iite bhizinesi hombe mudunhu reMiddle East. Uye isu tese tinoziva kuti Dubai ikozvino ndiyo nharaunda isingagonekwe mudunhu remari yechiIslam. Kuti uwane basa navo unofanirwa kuvatumira email neCV yako.
Shandisa Apa: https://www.coinbase.com/careers
Iyo coinbase kambani zvirokwazvo ndeimwe yakanakisa cryptocurrency kuchinjika mapuratifomu ekushandura mari mu cryptocurrency semuenzaniso bitcoin uye Monero. Rutivi rwusina kunaka chete rwekambani iyi rwunowanikwa. Kambani ine headquarter muSan Francisco California kuUS Saka, kuwana basa kune zvakanyanya kuoma nekuda kwema visa visa muUnited States. Asi vachiri kutumira CV kuCoinbase inofanira kunge iri smart kufamba.
Coinbase kambani zvakare iri imwe yemakambani akakurisa akakwidzwa muGoogle uye paFacebook. Chete nekuti ivo vari kubatira inoshamisa timu yekushambadzira.
Shandisa Apa: https://bitpay.com/about/team
Nekambani yeBitpay iwe uchavaka ramangwana rekubhadhara. Vari kuve newebsite yakasiyana chaizvo inewe panhengo uye yakanyanya nyore nyore kutumira mari kubva kuDH to BTC. Bhizinesi reB BitPay riri kuvaka zvivako zvekugadzirisa maererano ne cryptocurrency.
Vari kunyanya kusimbisa Bitcoin's open-source platform kuvanhu nevashandisi. Chinangwa ndechokuunza Bitcoin kunyika. Kubatsira vanhu neBitpay bank card uye kuita izvozvo zvakazoita nyore kwazvo kubhizinesi re blockchain.
Shandisa Apa: https://angel.co/coinswitch-co/jobs
Sangano rekushandura mari rinotangwa neboka revanjiniya zvikurukuru kubva kuIndia. Vakatama kubva kuAmazon, Microsoft, uye Zynga kungovaka nyika dzakanakisisa nekushanda zvakaoma kushanda cryptocurrency exchange platform uye 100% yakagadziriswa nekambani yekugadzirwa kwe blockchain.
Coin Switch inopa mari yakanakisisa yekutengesa mari pamusana we crypto market, ivo vanogona kuita izvozvo kuburikidza nekubatana kwezvinhu zvose zvinotungamirira kushanyira makambani.
Vari zvakare kuva nehurongwa hwakanaka hwekubhadhara uye kuenzanisa navo munguva chaiyo kune mamwe makambani mari coin switch ndiyo imwe yezvakanakisa. Nekudaro, ivo havasi kuwana chero peji rebasa asi iwe unogona kunyorera pane Angel.co webhusaiti. Iyi kambani inotsigira pamusoro pe250 cryptocurrencies uye anopfuura 45,000 pairi yekuchinjana. Saka kuchave nezvakawanda zvezvimbo itsva mumakore anotevera.
Shandisa Apa: https://www.careers.coinmama.com
Coinmama cryptocur lwemari yekutsinhana chikuva uye inokurumidza kukura kambani. Iri sangano rinova Israeli inozivikanwa yekutanga kambani. Uye chaizvo, sezvo ivo vakatanga iyi cryptocurrency kuchinjika chikuva mu2013 uye inowanikwa muRa'anana. Iva kambani yakanyanya kuyerwa. Paunotanga blockchain basa uye crypto-mari yekutengesa ruzivo iwe uchaziva sei yakakurumbira iri bhizinesi.
Coinmama inopa mhinduro kune vatengi vari kupfuura 182 nyika. Uye zvechokwadi, unogona kunyorera kwavari kubva chero nzvimbo pasi pano. Iri sangano rinopa masevhisi ekutsinhana nekukurumidza, kwakanaka uye kwakachengeteka kwakanyanya kushandurudza mabasa
Shandisa Apa: https://www.cointiger.com/en-us/#/recruit
Coin tiger zvinoshamisa cryptocurrency kuchinjika chikuva yekutengesa cryptocurrency nenzira inokurumidza. Iyo CoinTiger kambani yakazvipira kugadzira yepamusoro-chikamu cheblockchain sevhisi. Semuenzaniso, ivo vari kuwana online chat rutsigiro uye yakakwirira-mhando yepuratifomu kupa vashandisi ruzivo rwekupedzisira yekutengesa ne blockchain tekinoroji.
Coin tiger isangano rekukura nekukurumidza uye kana iwe uri kufarira indasitiri ye blockchain uye uine hunyanzvi iwe unogona kuve nebasa rekupa kubva kwavari ndezve chokwadi.
Shandisa Apa: https://www.luno.com/en/careers
Leno ndeimwe yakanaka Kambani uye vari kuhaya pamusoro pemazana mashoma evanhu pasi rese. Parizvino vari kuita mabasa mu Cape cape, London uye Singapore. Sezvazviri kuwana basa nekambani iyi ichave imwe yesarudzo dzakanaka pabasa rako.
Sezvo cryptocurrency kushandura shanduro ivo vari kubatsira vanhu kunzwisisa Cryptocurrencies seBitcoin uye Ethereum, Monero uye vari kuchinja nokukurumidza mamiriro emari pasi rose.
Kana iwe uri kutsvaga basa uye unotenda mune simba rekusiyana kwemashamba e blockchain. Iwe unogona kuvaka nokuumba masangano matsva, uye kuenderera mberi kwekutsvaga zvakanaka.
Shandisa Apa: https://jobs.lever.co/bitpanda
Bitpanda yakaverengerwazve pakati wepamusoro-yakatemerwa cryptocurrency exchanges mapuratifomu. Parizvino kambani iri kubatira muAustria muEuropean Union. Saka zve kuwana basa nekambani ino unofanirwa kunyorera vhiza kana kupfuudza iyo Maitiro ekubvunzurudza uye kuwana vhiza yekutsvaga.
Bitpanda zvirokwazvo ndiyo inotungamira yeEurope yekutengesa inonyanya kushanyirwa broker. Vanhu vanobva kumativi ese epasi vari kutenga nekutengesa Bitcoin, Ethereum, IOTA nezvimwe. Iyi kambani ndeye Fast, yakachengeteka uye 24 / 7 International kambani yebasa.
Shandisa Apa: https://careers.plus500.com/
Imwe yevekare Crystal Machina epasi. Management kubva kuna Israeri saka, zvirokwazvo kambani yakakodzera kuvapa mukana wekusimudzira. Iyo kambani yakapihwa mari mu2013 uye yatova neyayo chikamu muLondon stock exchange. Iwe unofanirwa kunyatso tarisa pane avo career website nekuti ivo vari kugadzirisa yakawanda yakawanda yemabasa inopa kwete muUK chete
Shandisa Apa: https://jobs.lever.co/kraken
Karen ikambani yakagadzirirwa vechidiki vari kushandisa tekinoroji ye blockchain. Kushanda naKraken ingori inotyisa. Imwe yezvakanaka zvinhu ndeyokuita basa kure. Saka, iwe unogona kushanda muTokyo, Dubai uye London. Dhijitari Assets uye seti uye portfolio yevatengi. Zvinokuratidza kukuratidza izvozvo iwe uchave nemukana wekushanda kwenguva refu.
Chimwe chinhu chakanaka ndechekuti Kraken crypto bhizinesi iri kukura zvakawandisa pamagariro ezvenhau. Ivo vari kutsvaga vakawanda vatsva vekutsvaga basa neashoma tech hunyanzvi. Saka, kushambadzira uye kutengesa pane chat live gara uchigadzira pfungwa.
Shandisa Apa: https://shapeshift.io/careers
ShapeShift haingori chete cryptocurrency chikuva. Ivo vari kutungamira vasiri-murindiri wedhi Asset Platifomu. Vanhu pasi rese vachishandisa data ravo uye zvekushandisa kuvaka yavo yega cryptocurrency chikuva. Mu2014, ShapeShift tobva tangopayona nguva nyowani yemari yedhijitari uye data ye cryptocurrency. ShapeShift ikambani yakanaka kwazvo ye IT mabhizinesi mamaneja, makomputa programmers uye teknolojia vanogadzira.
Shandisa Apa: https://jobs.cointelegraph.com/
Ivo vava kuita zvikamu zvitsva, mabasa nemari yemari telegraph. Iwe unogona kunyorera kuzviuru zvemabasa kumatunhu akati wandei. Uye kana iwe uri kutsvaga kuwana vanofarira mabasa inopa, iwe unofanirwa kunyorera pane yavo webhusaiti chikamu. Iyi kambani isati yambobata chete kuita zvinyorwa pamusoro pekutengesa kwe crypto, providing nhau uye ruzivo rwechizvino runobvumira vanotsvaga basa kuti vashandise kwemabasa akanakisa munzvimbo ye blockchain tekinoroji nzvimbo.
Iwe unogona ikozvino kushandisa yavo yakasarudzika chikuva. Tsvaga yakavandudzwa uye mari ine chekuita nemabasa vacancies zvakare mumusika we crypto. Unogona chaizvo sangana pamwe nerondedzero yemikana mikana mukati mebhokisi re blockchain. Uyezve, yakanakisa fintech uye crypto maindasitiri mhando kutumira mabasa pawebsite yavo.
Shandisa Apa: https://request.network
Iyi kambani inoshamisa chete, uye inotora mushamba wepamusoro mune chimwe chinhu chitsva. Iyo inonyorerwa network iyo inoratidzika semangwana rebhizimisi re-e-commerce. Kambani inosvika kune imwe nzvimbo yekutengesa zvikumbiro zvekubhadhara uye inoita kuti zvive nyore kuwana vashandisi vatsva veIndaneti.
Shandisa Apa: https://localbitcoins.com/careers
LocalBitcoins.com yakanaka kambani ye advanced tech IT nyanzvi. Nekuti inobvumira vanhu vatsva kuti vatsinhanise chiratidzo chavo pamwe chete nechiono chekambani uye chimiro. Iyi kambani, kune rimwe divi, inoshanda pamusika wemakristani musika uye kuBitco block technology.
Nharaunda dzemunharaunda dzine mabasa mazhinji. Kuedza kudzoka kusingagumi kwe teknolojia ye blockchain kwose kwose munyika. Iyi yebasa rekambani ndeimwe yenheyo dzenyika yeBitcoin.
Kana tikatora iyi kambani uye tichienzanisa nevamwe isu tichaziva kuti LocalBitcoins.com yakavambwa mu2012 uye iye zvino mazuva ano kuwana 4000-5000 kunyoreswa patsva zuva rega rega. izvo zviri kutipa inishuwarenzi kuti kufambira mberi kwebasa kuchapfuurira mberi.
Shandisa Apa: https://www.gemini.com
Gemini Crypto Exchange ndiyo shanduko yepamutemo yakavakirwa kuNew York, US. Uye zvakawanda stockbrokers vari kushanda ipapo nechekare.
However, Gemini only trades the cryptocurrencies in the United States. From US dollars, Bitcoin and Ethereum. So for working in this company probably, you must have a mavisa the U.S. company at the moment kuunganidza managers, the market in directors, product managers and engineers.
Data yeDynamic Assets
Shandisa Apa: https://www.binance.com/Careers.html
Iyi portal zvakare inopa yakanaka basa inopa kune avo vanotsvaga basa. Iwo maneja emakambani ane mamwe ekuwongorora zvakanyanya. Chete nekuti ivo vari kuumba zvakare huwandu hwekutengeserana pane dzinoverengeka dzekutengesa kwavo cryptocurrency. Biance ikambani inofarira kwazvo kushanda nayo.
Iyo kambani ine hukuru hwekushanda-kwehupenyu hwekureruka uye zvechokwadi paunenge uchishandira biance iwe unogona kukurudzirwa. Uye zvechokwadi, iyi yakasimba ine huwandu hukuru hwemari inowanikwa yekutenga vatengi vavo. Saka, zvakanyanya, kana iwe uchinyatsoziva bitcoins neMonero kana Etherum crypto musika. Unofanira zvirokwazvo edza kuwana basa nekambani ino.
Shandisa Apa: https://lightning.engineering/careers.html
Ikambani yeLayira Labs yakavakwa neboka revanjiniya vane shungu dzekristptography pamwe ne cryptocurrency nekugadzirisa nekuchengetedza uye zvehupfumi. Basa revanhu vane ruzivo rwemagetsi software injini vakashandisa maitiro echicheptography mune teknolojia yepasi rose.
Iyi fosi iri kurwira neiyo cypherpunks uye kuyedza kuunza iyo ethic technical kudzika uye kufungidzira mu blockchain bhizinesi. Saka, kana iwe uchida kushanda pamwe nemhando yekambani yekuchengetedza mukati memusika we blockchain, ndapota ona tarisa pane yavo webhusaiti uye shanda kune zvinzvimbo zviripo pane yavo webhusaiti.
Shandisa Apa: https://international.bittrex.com/
Bittrex iri kushandira panguva iyo iri kuita mabasa anopfuura 10. Mabasa anopa zvakasiyana zvakasiyana nedzidziso dzekugadzira mazano kumabhizimisi kusvika kune Chief Financial Officer.
Iyo ikambani inobhadhara panguva iyo muUnited States of America. Saka, zvingava zvakaoma kusvika ipapo kunze kwekuti iwe uri nehupenyu hwakanaka mu blockchain uye mune dzimwe mari.
Shandisa Apa: www.komodoplatform.com
Komodo kambani parizvino zvakare iri kuhaya vanhu pari zvino vari kuhaya nzvimbo dzinoverengeka. Ivo vachiri muchirongwa chekutanga chekuvandudzwa kwebhizinesi. Asi kana iwe usingaone iyo nzvimbo yakavhurika inokodzera ruzivo rwako pane webhusaiti yavo. Iwe unofanirwa kutumira CV yako kana iwe uchifunga kuti iwe une hunyanzvi hwakakosha hwekupa timu yavo.
Shandisa Apa: https://www.simplex.com/join-us/
Iyo kambani iri kurwa nehunyengeri. Iyo Simplex kambani inozivikanwa chaizvo senzira yekukurumidza kuchinja cryptocurrency. Maneja eiyi kambani anodarika akangwara. Chekutanga sarudzo kwavari yaive yekubatanidza matatu anowira maindasitiri e-commerce, hunyengeri & chengetedzo system mu blockchain tekinoroji.
Icho chakafuridzirwa ne bitcoin uye Etheramu chiratidzo chinoshandura nyika yekubhadhara kushandiswa kwekunaka (uye kune yakachengeteka). Saka, shandisa pa webhusaiti yavo. Tariro iwe uchange uine replay kubva kambani iyi.
Shandisa Apa: https://kufun-limited.breezy.hr/
Ku Coin inongova yakapusa Bitcoin uye mashoma mamwe cryptocurrency kuchinjika chikuva. Ivo vari kuve nehukuru hukuru hwekutengesa uye seams dzese vachishanda kwazvo vashandi vavo.
Ku Coin ikambani iko kwaunogona kuita basa kure. Saka, zvirokwazvo zvakanaka kune vashandi vepasi rese vasina vhiza. Tarisa pawebhusaiti yavo uye unyore yemabasa anonakidza ekupa.
Shandisa Apa: https://www.bitwala.com/careers/
Vari kubira vanhu vakawanda uye vanobva kuGerman. Iwe unogona kuita kuti chiroto chako chizadzikiswe naBigwala. Iwe unogona kugadzirazve kubhengi pamwe chete nechikwata chavo chinoshamisa che nyanzvi. Anoshamisa masevhisi anopiwa nekambani yavo anovatungamira kune yakakwirira miero. Imwe yemienzaniso ndeyako bhangi account muGerman uye kiredhiti kadhi pamwe neiyo.
Shandisa Apa: https://bitoasis.net/en/front/career/
Bit Oasis kambani inobatsira vanotsvaga basa kuti vabatane neyekutsva mhando ye cryptocurrency yenyika. Kana iwe uri kufarira bitcoin kana chero imwe mari. Uyezve, kana iwe uri kufara nezve zvinogona kuitika mukubuda blockchain musika. Bitoasis iri zvakare kambani yakanaka yekushanda mukati meAUE.
Bit Oasis iri kunyorera muDubai uye Abu Dhabi. Iwe unogona kubatsira nekambani ino kune akati wandei Bitcoin mapurojekiti eDubai. Asi usati waenderera mberi, ita shuwa kuti urikune chinoshamisa GitHub chimiro. Uye zvechokwadi, Linkedin akanongedza kuna Cryptocurrency. Yakanyanya kunaka point neiyi kambani ndeyekuti nzvimbo haina basa nezvavo maererano nerevhi. Chinhu chete chinodiwa ndihwo hunyanzvi hwako ruzivo uye ruzivo.
Shandisa Apa: www.loyal.com/careers
Loyyal chikuva ndechimwe chinokurumidza kukurumidza Dubai-based startups. Uye iyo kambani iri pakati nepakati yekukura nekukurumidza kwayo blockchain-based Dubai tekinoroji.
Imwe yekodzero inonyanya kuisa kuvekisa nyika yenhepfenyuro dzekuvimbika mune teknolojia ye blockchain. Uyezve, vatove vakabatana nemakambani makuru e Fortune 500 (akadai seBibM uye Deloitte) sevatengi.
Shandisa Apa: https://cobinhood.com/careers/
Yakanyanya kambani kambani yekushandira uye ivo vaine timu ine hunyanzvi yehunyanzvi. Panguva ino iyo kambani iri kutsvaga IT mamaneja pamwe neane programmers vane hunyanzvi. Uyezve, kambani iri yakavhurirwa expats uye kunyatsotarisa mukuzadza matsva emukati meimba.
Shandisa Apa: https://0xcert.org/jobs
Kambani inofarira zvikuru inobva kuEurope. Iri boka reboka rekambani rinowanikwa muSlovenia. Saka, pane dzimwe nguva, unofanira kuva neEuropean Union Passport. Asi kutungamirirwa kwekambani iyi kunonzwisisa kuti vanhu vane unyanzvi uye vane masimba vakachenjera kugara kune dzimwe nyika somuenzaniso kana iwe uri wePakistan kana India iwe unogona kuva nebasa navo. Zvechokwadi, dzimwe nyika pamwe chete dzinofungidzirwa, saka basa riri kure zvakanyanya kupfuura zvaunogona iwe.
Shandisa Apa: www.leewayhertz.com/careers/
Isu tiri kambani inokurumidza kukura yekuvandudza mafoni kambani yakavambwa mu2007 uye inotungamirwa muSan Francisco, ine mahofisi satellite muIrvine, Chicago, uye New Delhi. Boka redu rakaumbwa nevanohwina-vanogadzira vanogadzira uye zvinoshamisa vane hunyanzvi vanogadzira vanogadzira yepamusoro bhizinesi-mhando zviridzwa. Isu tinozvirumbidza pachedu nekugona kununura kwakanaka uye kwemaonero emushandisi. Isu takagadzira, kugadzira, uye kuendesa pamusoro pe 400 nharembozha, uye iko kungori kutanga kwenhau yedu: zviroto zvedu zvakakura.
Shandisa Apa: www.nemjobs.com
Blockchain tekinoroji inopa yakarongedzeka yakarongedzeka nzira yekuchengetedza yakachengeteka ledger yekutengeserana uchienzanisa nedhesi database. Iyi kambani ine akawanda mabasa anopihwa kune vashoma vanokwanisa nhengo. Unogona kuve nemabasa ekutanga anopa, zvakanaka zviri nani pane chinhu.
Shandisa Apa: www.ibcgroup.io
Imwe kambani yakanaka yekushanda semushandi. Nesangano iri, iwe zvechokwadi unowedzera huwandu hwebudiriro yekushandisa mumusika we cryptocurrencies. Asi, kune rumwe rutivi rwakaipa, iwe uchafanirwa kutungamira kune iyo hombe kudiwa kwebasa remabasa e-cryptocurrency basa uye basa rinoenderana nechave blockchain basa rakawanikwa. IBC vane mikana yebasa yakanyatsoitirwa chero vanofarira kutsvaga basa vanobva pasi rese. Uye zvechokwadi, mukati memunda we cryptocurrency uye musika uri kukura, vashandi vazhinji vatsva vanozoitirwa kure kune ino foramu. Edza kudaro shandisa uye iwe uchawana zvakare basa mukana mune yako email inbox.
Shandisa Apa: https://wachsman.com/careers/
Imwe crypto firm inofanirwa kutarisisa. PaWaksman, iwe unogona kuve nemhando dzakasiyana dzebasa dzinopa. Chikwata che maneja chekambani chinomiririra makambani anotungamira mu blockchain uye cryptocurrency nharaunda. Iyi kambani iri kubatira padanho rakakura muAmerica, Europe uye Asia, Singapore.
Iyo kambani iri kukura nekuwedzera uye pamusoro peiyo 30 mabasa ekupa akaiswa munguva pfupi yapfuura. Ivo vari kushingairira kutsvaga vanogadzirisa hunyanzvi neruzivo mu blockchain bhizinesi. Saka, kana iwe uri munhu akangwara zvikuru uye kutsvaga mabasa anotora njodzi. Iwe unofanirwa kushandisa CV yako uye uve mumwe wevanoda chinzvimbo muWakman kambani uye kujoina kambani yavo.
Shandisa Apa: https://digitalchamber.org/careers/
Chamber of Digital Commerce ikambani inofarira zvikuru nokuti haisi kutengesa crypto. Ivo vazhinji vekambani yekuchengetedza mazano eClubchain muChishanu uye inotungamirira Chamber of Digital Commerce !. Kunyanya kufarira zvikuru kushanda kana iwe uri muUnited States
Iyo Chamber yeDhijitari Commerce ine kuvhurika kwevadzidzi vekoroji uye vanopedza-danho vadzidzi kutora chikamu chebasa rounyanzvi muWashington, DC hofisi yavo. Iyo chete kambani isu yatakawana kuti kuve neye Internship zvirongwa.
Shandisa Apa: https://bitflyer.com/en-jp/recruit/
BitFlyer ikambani ine shungu uye nhamba. Nhengo yebhodhi re manejimendi ichaunza pamwechete vanhu uye ruzivo kune bhizinesi. Vashandi vavo vanobva kwakasiyana siyana nyika uye nyika vane huwandu hukuru hwehunyanzvi. Ivo varikushanda muTokyo uye munguva pfupi yapfuura vakatamira kuhofisi yavo nyowani kwavanowana vanhu vazhinji kwazvo kuti vashande navo.
BitFlyer kambani kuva yakawanda mabasa matsva anopa kune chero munhu anokwanisa. Kubva kuvatungamiriri vemakambani kusvika kune vashandiwo zvavo mudhipatimendi rekutengesa.
Shandisa Apa: www.boscoin.io
Remangwana re blockchain riri pano. Mari yeBos iri kuchinja iyo misika yese kuti ive nani system. Musimboti weRamangwana iBOScoin. Iyo kambani iri kubatsira vashandisi pane blockchain tekinoroji. Ivo vari kutsvaga vanotsvaga dambudziko uye kugovera muchiitiko ichi chinoshamisa pamwe!. Nekudaro, tarisa pane webhusaiti yebuscoin uye tora basa rinopihwa kubva kwavari.
Shandisa Apa: https://www.huobigroup.com/en-us/jobs/
Huobi boka rinoshandira vanhu vazhinji. Iyo kambani inogona kutora vashandi vepasi rose kuenda kuSingapore kana kuLondon. Saka, chaizvo, iyi kambani yakakodzera kuve neiyo yekuenda kune cryptocurrency mabasa. Join Huobi kubva kune chero nzvimbo pasi pano. Shandisa misika yepasirese uye unounze kukosha pasirese. Iyi firm inonyatso kupindura zvese zvinodikanwa kune vatorwa vari kutsvaga kuwana basa.
Shandisa Apa: https://www.atomintl.com/careers
Ikambani nyowani muHong Kong. Asi kunyatso kukura kuri pa internet. Iyi kambani yakatoziva zvinokwanisa kuitika kune vashandi vepo. Atom Group rinoziva kuti rakakura tarenda puru kune vanobvakacha zvichavabatsira kusvika chinangwa zvakanyanya kukurumidza. Uye mupfumi tsika musanganiswa kubva kuAsia uye Europe ichabvumidza iyo kambani kuti iwedzere uye iite ramangwana ramangwana. Basa rine Atom Group richava rakanaka kutanga muAsia cryptocurrency mabasa uye yega yakakwirira kubudirira.
Shandisa Apa: https://www.okex.com/pages/company/recruit.html
Iyi kambani panguva irikutsvaga technical ine hukama nevanhu uye mashandiro manejimendi. Asi kuchine kambani yakanaka yekushanda nayo. Rimwe rebasa rakabhadharwa zvakanaka ndeMukuru C ++ Wekuvandudza Injiniya pamwe neyeChivako Mukuru wechigadzirwa. Imwe chete CV kutumira saka ndizvo zvazvinofanira kuita inokurumidza uye yakanaka sarudzo yevatsva kutsvaga basa.
Shandisa Apa: https://makerdao.com/careers/
Muiti wekambani anoziva kuti angaziva sei mikana yemisika ye blockchain. Mutungamiri mapurisa emu sangano ari kutsvaka vanhu vane ruzivo uye vane ruzivo kubva munharaunda chero ipi zvayo pasi pano. Vanhu vanobva kuChina, Denmark neUnited States vachishanda pamwechete.
Unofanira kuedza kubatana muiti wevaki nokuti timu yavo ichakubatsira iwe kuvaka basa rinoshamisa rekufambira mberi. Pakera CV yako uye kutanga kutarisa uchapupu nekambani yavo inoshamisa. Nzira yakanakisisa yekuenda ikoko ndeyokuva nekodha yakachena uye inoona kubudirira kunobudirira.
Shandisa Apa: https://www.globalcap.com/jobs/
Iko musasa wepasi rose wakakwanisa kubudisa nyika yekutanga kuvhara kuenzanisa pasi pekutarisa kwekutonga kwakakwana. Iyi kambani inowanikwawo muLondon City uye zvechokwadi ndeye imwe yekambani inoda mari yekutsvaga mari munyika.
Kutenda kune Global cap cap timu nevashandisi vavo uye zvechokwadi vese vavanovatsigira. Global cap inova yakanaka uye inozivikanwa kambani muEurope. Mamaneja ekambani ino maneja kuwana chiitiko chinoshamisa mukushanduka kwemisika yemari. Saka, navo, iwe unozogona kudzidzira maitiro ekudyara mari pasi rose.
Shandisa Apa: https://appliedblockchain.com/join
Join Applied Blockchain business in London. Iri sangano rinoshandisa mazana emakwi evanhu muLondon City nePorto. Zvechokwadi, ivo ndeimwe kambani inofanirwa kuwana hurukuro.
Saka, kana uchitsvaga basa rakanaka repasi rese mune blockchain kambani iwe unofanirwa kutumira CV kwavari kunyanya kana iwe uchinge wanyatsotungamirwa mune yekodhi uye Js query. Ivo vari kuramba vachitsvaga vakakurudzirwa vanhu vane zvakanaka IT skil. Zvakare, London yakavakira vanhu vanokarira avo vanofarira kuendesa einono blockchain tekinoroji bhizinesi.
Webhupu Yakave Nesimba
Shandisa Apa: https://brave.com/jobs/
Shingaira iyo ikambani yevasikana yekambani iyo isingachengetedzi deta yako uye inokurumidza zvikuru kupfuura chero mimwe mamwe mabheji. Havasisina chero ICO kana cryptocurrency yebhizimisi yakabatana. Asi ivo vari kukwereta vanhu vane ruzivo rwakafanana nekambani ye cryptocurrency. Shanduro yeBrave inobatsirawo kuva nedzidzo dzepamusoro dzakadai seFD.
Saka, tarisa kune yavo kambani ruzivo uye edza kunyorera chinzvimbo chakanaka navo. Vakashinga vanowanzotaura vachitsvaga tech-vakatungamira vanhu pavanenge vari kushanda mu internet bhizinesi.
Shandisa Apa: www.solve.care.com
Ikambani yeEstonia ine mhando yepamusoro yebhizinesi. Ivo vari kuve nemikana yakawanda yemikana mikana, semuenzaniso, chipangamazano UI / UX uye webhusaiti dhizaini. Ivo vari account kuhaya muEurope panguva asi mukana wemabasa kubva webhusaiti yavo unotaridzika chaizvo.
Generally speaking, Executive Assistant to CEO and Sr.development manager or engineer seems like a very smart movement inside the crypto business. Well, try your luck with this employer, very easy way to send your updated curriculum vitae.
Shandisa Apa: https://www.huobi.com/careers/
Imwe kambani kubva kuSan Francisco, US Huobi yakapiwawo mikana yakawanda inoshamisa yemikana. Iyo kambani yakazviti HBUS Holdco Inc. Uye zviri zviviri blockchain uye cryptocurrency tekinoroji yekutanga bhizinesi rine hukama. Sangano iri riri kushanda zvakakwana pakati pehunyanzvi hwekugadzira uye emari vanoita misika. Ivo vakagadzirira kupa zvigadzirwa uye masevhisi kune vatengi vavo uye vakagadzirira kuhaya vakawanda vatorwa kubva kuzere pasi.
Sezvo nheyo muAmerica, inotungamirirwa zvizere nemari. Iyo kambani inodada kufambidzana munzvimbo yakanakisisa muSilicon Valley. Uyezve, kutora pfungwa dzekugadzira kune bhizinesi rekristpto, kazhinji kutaura, kusinganzwisisiki kwezvinhu uye kusagadzikana kufunga kunoita kuti kambani iyi ive yakakwirira muUnited States
Mamwe mawebhusayithi yeCreptocurrency unogona kuedza imwe nhanho navo
Shandisa Apa: https://zilliqa.com/careers.html
Iyi kambani yekrisptocurrency Kushanda paZilliqa iyo ichava mukana mukuru mubhizinesi re blockchain. Iwe unogona kuvabatsira ivo kuvaka Zillinqa brand kumativi ose enyika.
Neiyi kambani, iwe uchavaka iyo inotevera chizvarwa blockchain bhizinesi. Uye yakakwirira-kuburikidza mukati mukati me blockchain mapuratifomu akatenderera pasi. Saka, iyi kambani yakakodzera kupa simba nyowani yebasa mukana mukati mekushandiswa kwakatemwa uye cryptocurrency mhando yemapurojekiti.
Iyi cryptocurrency ndeye yekambani yeBitcoin, zvisinei, ivo vari kuve nekuparadzanisa webhusaiti kwaunogona kudzidza zvishoma usati wanyatso nyorera mari ye cryptocurrency mabasa. Bitcoin mari ine kukosha kwakanaka zvese coin market market uye vazhinji vatsva vatengesi vari kuwana zvinyorwa zvemashoko kubva ikoko.
Shandisa Apa: https://www.stellar.org/
Iyi crypto-budiriro system kubatsira vanhu kushandura hupenyu hwavo. Vari kutarisa yekukurudzira expats kuti vapinde muchikwata chavo chiri kukura. Saka, tarisa pane webhusaiti yavo uye ubatsire kuchinja nyika yemabhadharo!
Shandisa Apa: https://eos.io/
EOS cryptocurrency inodada zvikuru nevakaita tarenda. Mabasa akati wandei anogona kutorwa musangano iri. Vanotsvaga vebasa vanogona kusarudza kubva kumacoders vacancies, vagadziri, mamaneja eSEO, vashandisi vewebhu kutsigira vashandi, uye kunyangwe vakuru vanogadzira. Nekuti zvese zvavo zvikwata pfuura pamunda wese.
EOS akashandisa International expats.
This company teams are based in several locations around the world, India, Pakistan, U.S and Kanadha for example. People can really come from any of countries not even related to blockchain business. So, finding work with them reflecting their company sesangano repasirese rechokwadi.
Shandisa Apa: https://www.iota.org
Iota ndiyo imwezve cryptocurrency iyo vanhu vari kutengesa kunze kwenyika. Kwete yakakurumbira yakakurumbira uye haina kubva pazita asi yakanyatsoiswa mumusika wemari. Pari zvino havasi kuhaya. Asi ikambani yakanaka kuwana basa. Zvakakodzera kuti utarise zvakadzama nekuti iyi firm ndeyekuti inokura mumusika we crypto.
IOTA inofarira zvakasimba panguva iyo yava nechinzvimbo che 14th pamari yemari yemari. IOTA yekambani inogadzirisa maitirwo emitemo uye yedhijidhi achishandisa zvibvumirano zvakanaka. Vari kushandisa sangano rekuparadzira, rinangwa chekugadzira "Smart Blockchain Economy".
Shandisa Apa: https://www.circle.com/en/usdc
USD coin imwe kambani yemari ine mari yemari. Iyo USD Coin imari yekuAmerica-yakadzorerwa mari yakagadzikana. Yakanaka cryptocurrency chirongwa kuti awane basa. Parizvino havasi kubhisa vanhu. Asi zvakakodzera kuti utore hurukuro pfupi navo. Iyo USD Coin ipuratifomu yemari-chete. Iyo USDC ndiyo bhiriji pakati pemadhora nekutengesa. Uye zvirokwazvo inoshanda chaizvo mushe maererano neye cryptocurrency uye blockchain tekinoroji.
Uye kune avo vari kugoverana makambani uye mahara Edu shanduko dzemagetsi izvo zvatova kugamuchira fiat, vari kubatsira kubatsira mubhizimusi rekristpto.
Shandisa Apa: https://z.cash
Z Cash ndeimwe imwe kambani yakanaka inofanirwa kutarisa uye kukura sangano re teknolojia ye blockchain. Iko kambani yakavanzika yakavanzika yekutengeserana uye yakasimba yakasimba kuti iite zvazvinoita. iwe unofanirwa kuedza kuedza kutarisana nekambani iyi.
Zcash yaive dzakasimukira uye yakatangwa nevepamusoro cryptographers mu2016. Saka, mune urwu rudzi rwebhizinesi rakanyatsokodzera kuve nechitarisiko.
Sangano iri pasi peiyo protocol iri pamusoro pekutsvaga kwevasayendisiti kubva kuMIT, Technion. Zvimwe chete naJohns Hopkins, Tel Aviv University uye UC Berkeley. Ndokunge kupa vanhu imwe nzira yekushanda.
Shandisa Apa: https://www.dash.org
Dash kambani ndeimwe digital digitalcurrency. Sezvinobvumwa, iwe unogona kushandisa aya emari dzemari kuita zvakavanzika pamhepo. Iyo Dash kambani inoenda mumapuratifomu ekutsinhana. Iyo kambani yakakodzera kuwana basa uye zvirokwazvo ivo ndeimwe yezvakanaka uye nyatsokura mumusika wakadarika cryptocurrency. Iyo kambani iri kuenda chaizvo muchizvarwa chinotevera P2P network.
Shandisa Apa: https://neo.org
Neo Smart cryptocurrency ndeimwe yakanaka kambani. Neo iri kugadzira yakanakisa nharaunda yemari ye crypto uye madhijitari emari. Kambani yedu iri kukubatsira iwe kusvika kune ino kambani. Ivo kambani yakanaka ine zvinoshamisa logo izvo zviri kuvaka yakachenjera hupfumi. NEO kambani ishiza isina-purofiti inotungamirirwa nenharaunda blockchain. Imwe yenongedzo navo ndeyekuti ivo vanoshandiswa blockchain tekinoroji uye kuzivikanwa kwadhijitari kuita digitally pfuma mumusika we cryptocurrency musika.
Shandisa Apa: https://tezos.com/
Tezos iplatform nyowani mu blockchain bhizinesi rekuchenjera zvibvumirano uye decentralized application. Chikamu chakanaka kuve nekutarisa mabasa munguva yepedyo yepamberi. Parizvino kambani haisi kuhaya nekuda kwekutanga chirongwa chekuvandudza. Asi chokwadi, Tezos ibhlchachain inogona kubuda nekuzvisimudzira pachezvayo.
Vabati vezvinabhizinesi uye varidzi vemabhizimusi uye forse vatambi vanokwanisa kuvhota pakugadziriswa kune pfungwa inoshamisa iyi. Imwe yemakambani akanaka ane smart tekinoroji uye nedhijitari ruzivo.
Shandisa Apa: https://dogecoin.com/
Dogecoin ingano yakatemwa, peer-to-peer dijitari yemari. Kazhinji kutaura, mari iyi inotanga sekuseka paInternet. Asi varidzi vacho vanokurumidza kuziva kuti ichi chingave zano rakanaka kutanga.
Dogecoin iyi webhusaiti yakanaka uye ine chinzvimbo chakasimba pamari yemari cap. Iyi sevhisi yekambani inoita kuti iwe ugone kutumira mari online. Funga nezvazvo se "mari ye internet." Uye iwe uchazotsvaga rakakosha rinokosha sosi yeruzivo nezve ichi block bhizinesi.
Shandisa Apa: https://wavesplatform.com/
Mavhinga ndiwo mari uye nharaunda ivo vari kutarisira mari yakawanda kwazvo maererano ne cryptocurrency. Uye kambani iyi haisi kugadzirisa zvikonzero zvechokwadi. Nhepfenyuro yemagetsi inoramba ichienderera mberi kune iyo itsva yemari yemari yemari.
Waves mari inova chikamu chemhando yepasi rose inokura ye crypto mapuratifomu. Iyi kambani haina kungogadzira mari chete asiwo kutonga kwazvo kwazvo kugadzira kuwirirana kwemari wallet kune vatengi vavo.
Shandisa Apa: https://www.trusttoken.com/careers.html
TrustToken ndiyo kambani ine yakanaka yekuona. Uye ivo vari kuita webhusaiti webhusaiti. Ivo vakaisa parutivi basa democratize yemari mikana munyika blockchain nekusunungura mari kuburikidza nekutengeserana kwakavimbika kwe pfuma pasirese. Kuvimba tarisiro yekutarisira kuhaya expats inopa simba maofficial emakambani vane huwandu hutsva hwekuwana mari yakawanda, mafambisirwo emari, uye mikana yemari.
Isa Pano: https://qtum.org/en/about/recruitment
Qtum iyo inobhadhara munzvimbo dzakasiyana: Beijing, Shanghai, Silicon Valley. Kana iwe uine ruzivo muzvigadzirwa zvefoni, kambani ino zvechokwadi inzvimbo yakanaka kwauri. Nzira yekufambiswa kweR & D blockchain teknolojia neQtum ichave yakachenjera kufamba.
Qtum yakasimba ine nzvimbo yakanaka mumari yemari cap. Iyi Cryptocurrency mabasa inopa kubva Qtum inogona kubatsira iwe kuwana yako chinangwa. Uye zvirokwazvo, shanyira webhusaiti yavo nekuti ndizvo kukura uye kuhaya kunze kwenyika.
Shandisa Apa: https://litecoin.org/
Chimwe chinyorwa chekristptocurrency chinotungamirirwa nekombanikiti ye blockchain. Iyi kambani inoita nyore nyore kuvashandi nekuita kuti vape zvinhu zvose pahwindo. Zvinosuruvarisa, havasi kuita chikamu chebasa n website. Asi iwe unogona tsvaga kambani yemabasa post pa Linkedin. Tiri kunyanya kudavira kuti kambani ino ichabhadhara vanhu vakawanda muzotevera 10-15 makore.
Shandisa Apa: https://www.cardano.ogr/
Cardano crypto currency haisi imwechete kambani. Sezvineiwo, ivo vari kuve nemasangano e3. Zvese kushanda pachinangwa chimwe chete, inobatsira mukuvandudza tekinoroji ye blockchain inonzi Cardano.
Shandisa Apa: https://ww.getmonero.org/
Monero Cryptocurrency ndiyo imwe webhusaiti iyo iwe paunofanirwa kuve nekutarisa. Pari zvino ivo zvakare havana mabasa kana chikamu chebasa. Asi iyi kambani iri kukura uye zvechokwadi ichave nezvimwe nzvimbo munguva yepedyo yepamberi.
Shandisa Apa: https://holochain.org/team.html
Kune rimwe divi, kana iwe uine yekumberi-kuguma CSS hunyanzvi. Uye HTML yakanaka yekuvandudza ruzivo. Unogona vane mabasa akanaka anopa zvinobva kwavari. Zvakare kugadzirwa kwemapeji, imwe-peji rekushandisa, React, React-Native Iyi mhando yese yebasa uye ruzivo iwe zvaunogona kuunza kune ino kambani.
Shandisa Apa: https://ont.io/
Ontology company, boka re blockchain muChina. Vane mameneja echisimba ichi vakave avo vekutanga bhichaki chinonzi Chinese blockchain nyanzvi. Mishonga yavo huru inobva kuChina kuti ibatane neDecentralized Identity Foundation. Kwazvo zvakanaka uye kuva nechinzvimbo chakanaka pamakethe yekoti yemari.
Mamaneja ekambani iyi ane chinangwa chekuvaka iyo yakasarudzika decentralized ecosystem ye online zivikanwa. Yakagadziriswa kwazvo neye yakawanda yevashandi mabhizinesi zvinogara mubayiro mumabasa akanaka ebasa. Saka, edza iyi firm kune blockchain yakavhurwa sosi mabasa anopihwa.
Shandisa Apa: https://www.vechain.org/
VeChain kambani yakanaka kusimba pasina mitezo. VeChain ndiyo inotungamirira pasi rese bhizinesi rehurumende public blockchain platform. Izvo zviri kuSingapore uye vatungamiri vavo vanobva ikoko. Zvechokwadi, iwe unogona kuenda kumapeji avo uye unowana email yevanoshandira pasi pezasi peji.
VeChain ine chinangwa chekubatanidza blockchain tekinoroji kune yepanyika chaipo nekupa yakakwana yehutongi mamiriro, yakasimba yehupfumi semuenzaniso pamwe neyepamberi yeIoT kusangana, nemapiyona mune chaiwo-epasi rose maficha.
Shandisa Apa: https://renproject.io/
Kambani yeRen ndeye bhizinesi re crypto uye inopihwa simba nedetwork yakasviba yeRima node. Uye kazhinji kutaura, ino kambani inoshandisa yakachengetedzeka kuwanda comptip kuti kumhanya zvakavanzika-kuchengetedza manyorerwo. Saka, kana iwe uri kuve uine yakanaka chirongwa chehunyanzvi iwe unofanirwa kuvatumira CV yako uye mbiri. Ren, inofarira yakasimba kuverenga nezvayo nekuti ivo vanokwanisa kuzvimanikidza kuti vave kambani hombe.
Shandisa Apa: https://ddex.io/
DDEX chikuva chekutanga chakatemwa chakatsinhana kuvakwa paHydro Protocol. Iyo kambani haisi iyo inozivikanwa pasi rese. Asi kazhinji kutaura, kuwedzera tekinoroji, inopa ikozvino, chaiyo-nguva yekuraira inoenderana chinhu pamwe yakachengeteka pa-ketani yekugadzirisa. Izvo zvakakodzera kuve nekutarisa pane yavo webhusaiti. Iyo kambani iri kukura vanogona kunge vaine mamwe mabasa anonakidza pane webhusaiti yavo.
Shandisa Apa: https://www.bitinka.com/uk/bitinka/home
BItinka ndeye cryptocurrency broker uye chikuva chevatengi vekunze. Parizvino, havasi kuita basa rekubatanidza. Asi, iyi kambani ndeye kukura sangano. Saka, chokwadi ichave yakakodzera kuti utarise pane webhusaiti yavo.
Shandisa Apa: https://www.decred.org/
Chirevo ndechekuchengetedza mari yemadhini. Mari yacho inotanga kushanda kwayo mu2016. Chinangwa cheChina chekutengesa ndechekutarisira kugadzirisa hutungamiri hweBlocchain.
Iyi kambani inopfuura kungoita. Izvo zvakagadziriswa kugadzirisa chisarudzo uye kuzvipira kwekubhadharira zvakatibatsira kuti tive nemari yakawanda, yakashandura yedhijitori, isina rusununguko rwevanhu vatatu.
Shandisa Apa: https://www.augur.net/
Augur yekambani yakanyanya kufanana nekufanotaura kunoshandiswa zvakasimba zvichibva pa blockchain., Zvechokwadi ivo vari kutarisira yavo pachavo cryptocurrency uye blockchain yemari. Vatengesi vanogona kuishandisa mumushandi kana kuti vanogona kubudisira sarudzo yavo mukati me laptop.
Chimwe chinhu chinonakidza chokuti ne teknolojia ye blockchain iwe unogona kufanotaura nhamo kana kuti kukanganisa kwekambani yemari kana iwe uchizoziva kuti ungashandise sei nenzira yakakodzera.
Shandisa Apa: https://changelly.com/
Iyi ndiyo mutsa wenyeredzi inokura nekambani mukutsinhanisa mari yebhizimisi. The Changelly inotora nzira yakasiyana yekugadzirisa nzira yekutsinhanisa mari yakaenzana mu cryptocurrency.
Changelly panzvimbo yevatengi vavo vanochengeta yavo cryptocurrency papuratifomu yavo yemari yekushambadzira, vanogadza kutendeuka kwekutendeuka. Izvo zvechokwadi kupa nzira dzakawanda yekuchengetedza kutengeserana crypto huwandu. Dubai City Kambani yakakwanisa kuratidza kuti havasi kuwana webhusaiti webhusaiti. Asi zvichiri kukosha kuti upinde mukati uye uve nechitarisiko.
Mhedziso: Mabasa uye Basa mu Cryptocurrency
Usashatisa nguva yako uye shandisa basa reBitcoin muDhailand. Nokuti cryptocurrency ndiyo inokurumidza kuwedzera misika. Dubai City Company helping job seekers to get a job. Especially with high technology market. Our company is waiting for your updated resume. No matter where are you from. We are taking vanotsvaka basa kubva kuIndia uye vachivaisa ku Dubai. Cryptocurrency Jobs iko kuvhura vatorwa vatsva kubva kumativi ose enyika.
Kune imwezve nzira yekuwana iyo yakadai yemabasa. Somuenzaniso, unogona inyorera CV yako kumabasa ebhodi kana kuti nyora zvinyorwa zvako pamusoro nzvimbo yeMiddle East portal yevashandi. No matter what way you will go. As long as a job offer from the trading industry come along. You are the winner of a job search mutambo.